Barruucha isa fuula irratti akka wiirta'uu barbaadduu fili.
Saagii - Gooayyaa filadhu.
Bakka Korkoddii keessaa, Fuulatti fili.
Bakka Size keessaa, gara goodayyaa qindeessi.
Naannoo Qubannoo keessaa, sanduuqawwan Surdala fi Sarjaa keessaa "Wiirtessi" fili.
Hagamtaa goodayyaa jijjiiruuf, qaree goodayyiichaa harkiisi.
Title is: Barruu tokko irraa Barruu Wiirtessuuf Goodayyaa fayyadamuu